Ukubuyekezwa: 'Amanzi Amnyama: Iziphambeko' Ebumnyameni - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Ukubuyekezwa: 'Amanzi Amnyama: Izimpophoma Zolasha Ebumnyameni
Ukubuyekezwa: 'Amanzi Amnyama: Izimpophoma Zolasha Ebumnyameni
by UJacob Davison August 6, 2020
ebhalwe ngu UJacob Davison August 6, 2020
Kukhona nje okuthile ngezilwane ezidlayo kanye nezinhlekelele zemvelo ezishaya ngempela imizwa nge-prche psyche. Izinhlobo ze-Asa, sesithuthuke safika ezingeni lapho kungadingeki sikhathazeke ngokuthile okungaphezulu kwethu kuhla lokudla okusikhiphayo. Kodwa nokho, uvalo luhlala lukhona. Okuphinde kuchaze ukuthi kungani izehlakalo zangempela zokuhlaselwa kwezilwane zifana nezindaba. Njalo lapho ibhere noma ushaka lihlasela othile, lokho kuyisihloko esikhulu. Njengoba kwenzeka ngo-2003 lapho abantu abathathu abasha bephuma baya ehlane laseNyakatho ne-Australia futhi bazithola bevinjezelwe yingwenya enamandla. Lokhu kusebenze njengesisekelo se-movie ka-2007, Amanzi Amnyama. Manje, eminyakeni engaba ngu-13 kamuva, ukulandelana kuvela kusuka emaphandleni nge Amanzi Amnyama: kwalasha.
Ebuyela eNyakatho ne-Australia, uJennifer (Jessica McNamee) ugqugquzelwe yisoka lakhe elalinesibindi u-Eric (Luke Mitchell) nabangane uYolanda, Viktor, noCash (Amali Golden, Benjamin Hoetjes, Anthony J. Sharpe) bathatha isinqumo sokuya e-spelunking ehlane. Ukwehlela ohlelweni lomhume olusanda kwakhiwa nolubonakala lungathintwanga. Ngeshwa amashwa ayengaba nawo, kwahlasela isiphepho, kwagcwala imigede kwawafaka ngaphakathi. Futhi uma lokho kwakungekubi ngokwanele, banezivakashi ezithile ezilambile kakhulu ababhekana nazo.
Umqondisi u-Andrew Traucki uqondise ndawonye indaba yoqobo yokusinda kwengwenya e Amanzi Amnyama futhi wasebenza engozini efanayo ehlukanisiwe yesilwane Indawo Yamakhorali okubandakanya ababhukudi vs oshaka. Manje, ebuya yedwa, ubuyele ezimpandeni zakhe ngalokhu kulandelana okungokomoya. Ngeshwa naphezu kokuhleleka kokuhlelwa nesakhiwo nokwesabeka okungapheli kwezingwenya, le movie ayisijabulisi neze. Ngemuva kwama-movie anjenge Isikhafu futhi 47 Amamitha Phansi okwazile ukukhuphuka ezigxotsheni zaya ezingeni eliphezulu ngangokunokwenzeka. Ngakho-ke, ngenkathi Amanzi amnyama: kwalasha inesisekelo esithandekayo esithembisa ubungozi obuningi, isenzo nokwethuka kwezitha zezingwenya kuvame ukukhuluma ngakho.
Ukugxila okukhulu kwesakhiwo kuvame ukuwela kubalingiswa ukungasebenzi kahle nokulwa njengoba belwa ukuze baphile. Okuhle ukugcwalisa ukujula komlingiswa wabo ngaphezulu, kepha ngasikhathi sinye iwela kwi-soap opera efana nedrama. Njengokululama kukaViktor emdlavuzeni kanti ezinye zivele zisonteke futhi zishintshe kubudlelwano bezinhlamvu nezambulo. Futhi ake sibhekane namaqiniso, silapha ukuthola izilo, kulokhu, izingwenya. Ngendlela okuqoshwa ngayo i-movie asizitholi eziningi zazo ngendlela esingathanda ngayo futhi ukwethuka akusebenzi ngokuphelele.
Ezinye zezigcawu engizithandayo ku-movie empeleni zisekuqaleni ngesikhathi sesandulela sohlobo oluthile. Izivakashi ezimbalwa zaseJapan (uLouis Toshio Okada, uRumi Kikuchi) ziyaxabana emaphandleni ngenkathi zingena ngephutha zingena ezinhlelweni zomgede wengwenya ngezansi. Kwenzela ukuqhuma kwangempela kwe-adrenaline yize imfishane. Futhi i-movie iyisebenzisa kahle i- emihlathini njenge-credo yokuncane okubonayo, kuyesabeka kangakanani. Ezinye zezikhathi ezishubile kakhulu lapho abalingiswa kufanele badabule emanzini abangene, bangaqiniseki ukuthi esinye salezi zilwane ezinamaqabunga sizohlasela nini.
Akukona ukuphuka komhlaba, kepha uma usesimweni sendaba esheshayo yezinhlanya vs izingwenya ngaphansi komhlaba, lokhu kwenzelwe wena.
Amanzi Amnyama: kwalasha ishaya i-VOD ngo-Agasti 7th, 2020
'Isiqalekiso samafilimu' Isikhathi sesi-2 ngokusemthethweni kwiMisebenzi Says Shudder
'I-Antebellum' Yeqa Amatiyetha Asekhaya, Imisa Usuku Lokukhishwa kwe-PVOD